Al Shabaab oo dhowr gantaal ku tuurtay Xereda Xalane - Awdinle Online
Al Shabaab oo dhowr gantaal ku tuurtay Xereda Xalane
April 26, 2020 (Awdinle Online) –Dagaalyahana Al-shabaab ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegtay in ay waaberkii hore ee saaka weerar madaafiic ah ku qaadday xarunta weyn ee Xalane ee magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Xarunta Xalane waxaa ku yaalla saldhiga ugu weyn ee ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ku leeyihiin Soomaaliya gaar ahaanna Muqdisho waxayna sidoo kale hooy u tahay dibloomaasiyiin Shisheeyey iyo hay’ado caalamiya.
Warbaahinta taageerta Al-shabaab ayaa ku soo warrantay in jugta qaraxyo waaweyn saaka laga maqlay gudaha xarunta Xalane kadib markii ay Al-shabaab ku qaadday weerar madaafiic ah inkastoo aysan xusin khasaaraha ka dhashay weerarka.
Sidoo kale Warbaahinta Al-shabaab waxa ay sheegtay in qiiq iyo uuro madow ay cirka isku shareertay kadib markii ilaa 7 madfac ay ku habsadeen xaruntaas Xalane oo kaabiga ku haysa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aden Cadde.
Dhinaca AMISOM ayaan weli ka hadlin weerarka la sheegay in lagu qaaday xaruntaas Xalane iyo haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarka Al Shabaab.
Al Shabaab ayaa saan oo kale marar badan weerar ugu qaaday Xerada amaankeedka aadka loo ilaaliyo ee Xalane,waxaana ka dhashay khaarooyin kale duwan.
Laamaha Amaanka Soomaaliya wali ka hadlin sheegashada Al Shabaab ee ah in ay weerar ku qaadeen saldhiga Ciidanka AMISOM ee Magaaladda Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya iyo halka laga soo tuuray dhowr hoobiye oo dhawaqooda laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah Caasimada Soomaaliya.
Previous articleTurkiga oo shaqaalihiisa ka daad-guraystay Soomaaliya.
Next articleDhageyso :-Khaad badan oo markale lagu gubay Garow iyo digniin la diray